कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ? व्यवसायीको यस्तो सुझाव « Janata Samachar
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दापनि दीर्घकालीन अवस्थालाई हेरेर ल्याउनुपर्नेमा सबैको जोड रहेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रका सुझाव समेट्ने कोशिस गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिबारे सबैसँग सुझाव संकलन गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित निजी व्यवसायिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ । पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिनेछ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकार भट्ट निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भने अबको तरलताको व्यवस्थापनका लागि मुख्य आशा नै मौद्रिक नीति रहेको बताउनुहुन्छ । व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमा मुख्यतः पुनर्कर्जा, ब्याजदर र पुनसंरचनालाई जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायी नाफा भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन लागि परिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई छ ।
यतिबेला सबैको ध्यान राष्ट्र बैंकतिर केन्द्रित छ । बैंकको ब्याजदर कम गर्नलाई बैंकरहरु प्रयासरत छन् । मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दापनि दीर्घकालीन अवस्था हेरेर आउनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको सुझाव छ । राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउनमा केन्द्रित बन्नुपर्नेछ ।